GV Face: Ahoana ny fahatsapanao amin’ny voambolana “Fampihorohoroana”? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2015 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Română , русский, Deutsch, 日本語, عربي, English
Rahoviana isika no mametraka ny herisetra iray ho “fampihorohoroana” ary rahoviana isika no hilaza ny mpitolona iray ho “mpampihorohoro”?
Raisin'ny Global Voices ho tena zava-dehibe tokoa ny anarana sy ny petak'anarana. Avy amin'ny fitsipika mipetraka ato amin'ny toniam-panoratana: “Mitandrema amin'ny petak'anarana raiketinareo amin'ny tsirairay, vondron'olona sy vahoaka. Anontanio ny voambolana, anarana, sary ary fomba ampiasain'ny fampitam-baovao hafa sy ireo governemanta — ny petak'anarana izay mifanaraka amin'ny fitsipika sy ny soatoavintsika ihany no ampiasao”.
Efa nanangana fifanakalozan-kevitra hidify [fa tsy hifidy] ny fampiasana ireo voambolana horohoro, fampihorohoroana, mpampihorohoro ny ekipam-panoratana ato aminay raha tsy ny tsonga na ny loharanom-baovao nakana azy mihitsy no mampiasa azy, satria :
tsy misy ny famaritana tokana eto ambany masoandro. Malalaka dia malalaka ireo famaritana efa misy.
misy ny fihoaram-pefy amin'ny fampiasana ilay voambolana. Rehefa ampiasaina ilay voambolana, dia matetika efa nidirana politika ilay izy. Ohatra, any amin'ireo firenena Tandrefana, amin'ny miozolomana ihany no ampiasaina ilay voambolana. Mampiasa azy ihany koa ny governemanta hahatonga ireo fanehoan-kevitra hafa noho ny azy ireo ho heloka bevava, tahaka ny nahazo ireo blaogeran'ny Zone9 tao Ethiopia.
Fitsipiky ny toniam-panoratana ato amin'ny GV, izay mametraka fa tokony hitandrina amin'ireo fametahan'anarana isika.
Nifanaraka izahay fa “matanjaka kokoa noho ny mpamari-toetra ny famariparitana ireo (fi)hetsika nisy”. Ary tokony ho mailo izahay amin'ny mety ho kirakiran'ny governemanta na vondron'olona mitady hifehy ny fomba fitantarana sy ny fomba fijery amin'ny alalan'ny petak'anarana.
Tamin'ny fanarahana ity fifanakalozan-kevitra ity, ny iray amin'ny mpandray anjara hatry ny ela indrindra avy any Però, Juan Arellano, no naneho ny ahiahiny fa manevateva ny fahatsiarovana ireo lasibatra matin'ny fampihorohoroana ny fanapahan-kevitra tsy hampiasa ny petak'anarana. Nalainy ho ohatra amin'izany ny Sakelika Manjalanjelatra [fr: Sentier Lumineux] tao Però.
Amin'ity andian'ny GV Face ity izahay nanokatra ny fifanakalozan-kevitra amin'ny petak'anarana, ny politikan'ny fiteny indrindra fa manodidina ny “fampihorohoroana” ato amin'ny fikambanana Global Voices.
Juan Arellano moa dia nohatevenin'i Toniam-baovaon'ny GV Lauren Finch, Taisa Sganzerla, tonian'i Brezila, blaogera Libaney sady mpandray anjara avy ao Afovoany Atsinanana Joey Ayoub, tonian'ny RunetEcho Kevin Rothrock ary i Elizabeth Rivera, tonian'ny fampitam-baovao sosialy sady mpandray anjara avy any Amerika Latina.